kzay - MYSTERY ZILLION
android Root	အခုလို ပြည့်ပြည့် စုံစုံ ရှင်းပြပေးတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ် ကို ပြုံး ရေ။
Comment by kzay
android Root	ကျေးဇူးတင်တယ်ဗျာ။အခု မှ ရှင်းသွားတယ်။
please help me !	ကျေးဇူးတင်တယ်ဗျာ
စိတ်၀င်စားလို့ပါ	thank you sir !:rolleyes:
ကျနော်ပို့ပေးမယ်	ကျနော်လည်ဖတ်ချင်တယ်ဗျာ [email protected] ပါ
smartphone နဲ့ပတ်သက်ပြီးအကြံပေးကြပါအုံး	symbian phone ကိုတော့ ၀ယ်ဖို့အားမပေးပါဘူး။ android phone ကိုတော့ ဖြစ်နိုင်ရင်၀ယ်စေချင်ပါတယ်။ ကျနော် ကိုယ်တိုင်လည်း android phone ကိုစိတ်၀င်စားတယ် ။ အထူးသဖြင့် အောက်တိုဘာလ (ဒီလ) မှာထွက်မယ့် HTC DESIRE HD နဲ့ ့HTC DESIRE Z တို့ကို အရမ်းစိတ်၀င်စားတယ်…
0 Powered by Vanilla